Mogadishu Journal » Deegaano muhiim ah oo lagala wareegay Al-shabaab
Mjournal :-Ciidamada dowladda Soomaaliya ee howlgalka ka wadda gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegay in ay degaano dhowr ah oo muhiim ah ay kala wareegeen dagaalyahanada Al-Shabaab.
Abaanduulaha Ciidamada dowladda ee Soomaaliya Cabdullaahi Cali Caanood oo ku sugan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in Al-Shabaab ay ka qabsadeen degaano ku yaalla gobolka Shabeelaha Dhexe , kuwaa soo hoos yimaadda degmada Mahadaay.
Waxaa uu sheegay in mudooyin ay wadeen howlgal ka dib in ay Shabaab kala wareegeen degaanada ku yaalla Wabiga Jiingiisa .
Degaanada ugu muhiimsan ayuu ku sheegay in ay yihiin Warciise iyo sidoo kale Tuullada Cali fooldheere.
Qiyaastii dhul dhan 100 KM ayuu sidoo kale tilmaamay in ay Shabaab kala wareegeen.
Xildhibaannada aqalka sare oo booqanaya deegaannadii laga soo doortay